Lammaane Diley Haweeney Uurleh Si ay Ilmeheeda u Qaataan (Sawirro) – Radio Daljir
Agoosto 30, 2017 8:24 b 0
Lamaane u dhashay dalka Mareykanka kuna nool gobolka North Dakota ayaa lagu soo oogay dacwad la xariirta in ay afduubteen kadibna si ula kac ah u dileen haweeney laheed Uur sidood bilood ah.
Lamaanahan oo lagu magacaabo William Hoehn oo 32 jir ah iyo Brooke Crews oo 38 jir ayaa ku eedeesan in ay ka dambeeyeen dilka Savanna LaFontaine-Greywind oo 22 jir ah, waxaana haweeneydan la waayay 19kii bishan.
Meydkan haweeneyda la dilay ayaa laga helay wabiga North Dakota iyada oo bac ku duuduuban sidoo kale caloosheeda laga saaray ilmihii ku jiray, waxaana meydka gacanta ku haya oo baaritaano ku wada ciidamada booliiska.
Ciidmada booliiska ayaa xabsiga u taxaabay lamaanaha dilkan lagu tuhmayo oo lagu qabtay cunug yar oo maalmo dhalan, waxaana cunugan loo maleenayaa in uu yahay cunuga caloosheeda laga soo saaray haweeneyda la dilay.
Lamaanayaasha dilka geestay ayaa mari doona ciqaab adag hadii lagu helo dambiga ay ku eedeesan yihiin, waxaana booliiska baaritaan ku sameenayaan hido sidaha DNA-da ee cunuga yar ee la hayo iyo haweeneyda la dilay.